စံစီပိုး၊ ဆာ၊ ဒေါက်တာ - ဝီကီပီးဒီးယား
(1870-10-04)အောက်တိုဘာ ၄၊ ၁၈၇၀
ဇွန် ၇၊ ၁၉၄၆(1946-06-07) (အသက် ၇၅)
ဆာ စံစီပိုး၊ စီဘီအီး (အင်္ဂလိပ်: Sir San C. Po, C.B.E.) (၁၈၇၀-၁၉၄၆) သည် ကရင်လူမျိုးရေးလှုပ်ရှားသူနှင့် ဆရာဝန် ဖြစ်သည်။ ကရင်အမျိုးသားအသင်းကို ဦးဆောင်ကာ ကရင်ပြည် သီးခြားလွတ်လပ်ခွင့်ရအောင် ကြိုးပမ်းခဲ့သည်။
၁၈၇၀ ပြည့်နှစ်၊ အောက်တိုဘာလ ၄ ရက်နေ့တွင် ပုသိမ်ခရိုင်၊ ကိုးစုရွာ၌ ဖွားမြင်သည်။ အဘမှာ တိုက်သူကြီး ဦးအောင်ညို ဖြစ်ပြီး အမိမှာ နော်ပဂေး တို့ဖြစ်သည်။ ငယ်နာမည်မှာ စံပိုး ဖြစ်သည်။
ငယ်စဉ်က ပုသိမ်မြို့ရှိ အမေရိကန်သာသနာပြုကျောင်းတွင် ပညာသင်သည်။ ကိုးစုရွာမှာ ပုသိမ်၏မြောက်ဘက် (၅) မိုင်အကွာတွင် ရှိရာ နေ့စဉ် ခြေကျင်လျှောက်ကာ ကျောင်းတက်ခြင်း ဖြစ်သည်။ စံပိုးအား ကျောင်းအုပ် ဒေါက်တာ ချားနီကော (Charles Nichols) က အမေရိကန်သို့ ပညာသင် လွှတ်သည်။ ထိုအချိန်က အသက် ၁၄ နှစ်သာ ရှိသေးသည်။
အမေရိကန်ရောက်သောအခါ ဒေါက်တာနီကောက အဒေါ်ညီအစ်မ နှစ်ဦးထံတွင် အပ်နှံခဲ့သည်။ ထို ခရွန်ဘီ (Crombie) ညီအစ်မပိုင် ယာခင်းတွင် နေထိုင်လျှက် အထက်တန်း ပညာ ဆက်သင်သည်။ ထိုညီအစ်မ၏အမည်ကို အလယ်တွင်ထည့်ကာ စံစီပိုး (San Crombie Po) ဟူ၍ ပြောင်းခဲ့သည်။ 
ထို့နောက် ကောလဂိပ်မြို့ရှိ ဆေးပညာကို စတင်သင်ယူပြီး နယူးယောက်ရှိ အဲလဗာနီ ဆေ;ပညာ ကောလိပ် (Albany Medical College) ၌ ဆရာဝန်အတတ်ကို ဆက်လက်သင်ကြားခဲ့သည်။ ယင်းကျောင်းမှပင် ဆေးပညာဘွဲ့ကို ၁၈၉၃ ခုတွင် ရသည်။ ထိုနှစ်တွင်ပင် အမေရိကန်နိုင်ငံသားအဖြစ် ခံယူသည်။
၁၉၈၄ တွင် မြန်မာပြည်သို့ ပြန်ကာ ပုသိမ်၌ ခရိုင်ဆရာဝန်အဖြစ် အမှုထမ်းသည်။ ပုသိမ်၌ (၅) နှစ်ခန့်၊ ကျောက်ဆည်၌ (၁) နှစ်နီးပါးနှင့် မြောင်းမြ၌ (၄) နှစ်ကြာ တာဝန်ထမ်းသည်။
၁၈၉၅ ခုတွင် ကရင်အမျိုးသားအဖွဲ့ တည်ထောင်သူ ဦးလူနီ (Loo-Nee) ၏ သမီး အေမီလူနီ (Amy Loo-Nee) နှင့် လက်ထပ်သည်။ သားသမီး (၇) ယောက် ပွားစီးသည်။
၁၉၀၂ ခုတွင် အလုပ်ထွက်ကာ ပုသိမ်၌ ကိုယ်ပိုင်ဆေးခန်း ဖွင့်သည်။
ပုသိမ်မြို့ မြူနီစပယ်အဖွဲ့ဝင်အဖြစ် ၈ နှစ်ခန့်မျှ ထမ်းဆောင်သည်။ ယင်းမှစ၍ နိုင်ငံရေးနယ်ပယ်သို့ ဝင်သည်။ ကရင်အမျိုးသားတို့တောင်းဆိုသောကြောင့် မြန်မာ့အရေး၌ ပါဝင်ဆောင်ရွက်ရန် အမေရိကန်နိုင်ငံသားအဖြစ်မှ စွန့်လွှတ်၍ ဗြိတိသျှ လက်အောက်ခံနိုင်ငံသားအဖြစ် ခံယူခဲ့သည်။
၁၉၁၅ ခုတွင် ဥပဒေပြုကောင်စီတွင် စာရင်းသွင်းခံရကာ ၁၉၁၇ မှ ၁၉၂၃ အထိ မြန်မာပြည်ဥပဒေကောင်စီ၌ မင်းတိုင်ပင်အမတ်အဖြစ် ဆောင်ရွက်ခဲ့သည်။
၁၉၂၁ တွင် ဗြိတိသျှအစိုးရက မြန်မာနိုင်ငံ ပြုပြင်ပြောင်းလဲပေးရန် စုံစမ်းရေးကော်မရှင်ဖွဲ့ရာ အဖွဲ့ဝင်အဖြစ် အိန္ဒိယသို့ သွားရောက်ဆွေးနွေးသည်။
၁၉၂၃ တွင် (၉၁)ဌာနအုပ်ချူပ်ရေးသို့ ပြောင်းလဲသည့်အခါ ဧရာဝတီတိုင်းအတွက် ဥပဒေပြု လွှတ်တော်အမတ်အဖြစ် ရွေးကောက်ခံရသည်။ 
၁၉၂၅ တွင် ယောက္ခမဖြစ်သူ၏ ဒေါကလူ (ခေါ်) ကရင်အမျိုးသားအဖွဲ့ကြီး၌ ဥက္ကဋ္ဌအဖြစ် ရွေးချယ် ခြင်းခံခဲ့ရသည်။ ကရင်လူမျိုးတို့အရေးကို လွှတ်တော်၌ တက်တက်ကြွကြွဆွေးနွေးသဖြင့် ကရင်တို့၏ ဖခင်ကြီးအဖြစ် သတ်မှတ်ကြသည်။
၁၉၃၇ ခုနှစ်တွင် အိန္ဒိယပြည်မှ မြန်မာပြည်ကို ခွဲလိုက်ပြီးနောက် အခြေခံဥပဒေအရ အထက်လွှတ်တော်အမတ်အဖြစ် ရွေးကောက်ခံရသည်။
၁၉၂၈ တွင် ဒေါက်တာ စံစီပိုးသည် ဗမာနှင့် ကရင်များ (Burma and the Karens) စာအုပ်ကို အင်္ဂလိပ်ဘာသာဖြင့်ရေးသားထုတ်ဝေခဲ့သည်။ ယင်းစာအုပ်တွင် ကရင်အမျိုးသားတို့၏ ရှေးဟောင်းရာဇဝင်၊ စိတ်နေသဘောထား၊ အတွေးအခေါ် အယူဝါဒ စသည်တို့ကိုဖော်ပြပြီး ကရင်အမျိုးသားတို့၏ နိုင်ငံရေး လိုအင်ကို ရေးသားထားခဲ့သည်။ 
ပထမကမ္ဘာစစ်၌ လူမှု့ဝန်ထမ်းလုပ်ငန်းနှင့် စစ်သားစုဆောင်းရေး လုပ်ငန်းများတွင် ပါဝင်ဆောင်ရွက်ခဲ့၍ ဗြိတိသျှအစိုးရက ၁၉၂၄ ခုတွင် စီဘီအီးဘွဲ့ (Commander of the Most Excellent Order of the British Empire) ချီးမြင့်ခဲ့သည်။
၁၉၃၃ တွင် အင်္ဂလိပ်အစိုးရတို့သည် ဆာဘွဲ့ဖြင့် သူကောင်းပြုခံရသည်။
ဒေါက်တာစံစီပိုးသည် ဒုတိယကမ္ဘာစစ်ကြီးအပြီး အတွင်း၌ ကရင်အမျိုးသားအသင်း အကြံပေးနာယက အဖြစ်ဆောင်ရွက်ခဲ့သည်။ စစ်ပြီးသော် နာမကျန်းဖြစ်လာပြီး ၁၉၄၆ ခုနှစ် ဇွန်လ (၇) ရက်နေ့တွင် ပုသိမ်မြို့၌ ကွယ်လွန်ခဲ့သည်။
↑ Shah Paung (Jun 2004) "San C. Po: Elusive Dream". Irrawaddy. Vol. 12 No. 6.
↑ "Sir San C Po". Karen Heritage.
↑ San C. Po (1928) "Burma and the Karens".
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=စံစီပိုး၊_ဆာ၊_ဒေါက်တာ&oldid=453871" မှ ရယူရန်
ဤစာမျက်နှာကို ၁၉ မတ် ၂၀၁၉၊ ၀၃:၁၄ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။